घट्ना तथा सब्दहरु काल्पनिक हुन खयर कसैको जिवनमा मेल खाए संयोग मात्र हुनेछ ।
मलाइ थाहा छ तिमी त्यहाँ थियोउ जब म तिम्रै नजरमा थिए । सायद तिमिले भुलेउ होला एउटा साथी नभुल्नु पनि कसरी त्यो बाटोमा भेटेको यात्री ।जिन्दगी त अझै छ तिमी कहाँ हराइगयोउ । सायद रहरैरहरमा बाटो दोबाटो बनिगए । हिड्नु छ कति पाइलाहरु अनि हिड्दा हिड्दै रोकिन्छन् यी खुट्टाहरु । सम्झी कता कता मनमा माया पलाए आउ म त उहीँ एक यात्री न हु । बितिगए बर्ष ,ग्यालरी भरी तस्वीर जोगाइ राखे एकपटक हासी देउ फगत मनले भन्छ मनकै सुनिदेउ त्यो यात्री को हो भनी भुली ।
nishan.wordpress	Thoughts	Leaveacomment December 23, 2018 1 Minute
निसान भाइ कता छौ ?
ए बिजए दाइ , म सुतिरा छु ।
गोसाइँकुण्ड जानी फिक्स भयो तिमी सिदै नुवाकोट आउ ,
१० बजिसक्यो बस भ्याइन्छ र दाइ ? अरु कुरा थाहा छैन तिमी तुरुन्तै आउ ।ल दाइ ।
हतार हतार ड्रेस लगाइ बसपार्क मा कल गरे , रेसम दाइ मलाइ डोटेल बेसिको  एउटा
टिकट राख्दिनु है अन्त्य घर पुगियो । भाइ काठमाडौं बाट अरु केटाहरू आउदै छन है
अब भोलि दिउँसो हिड्ने ।ओके भने ।
भोलि पल्ट बिजए दाइको कल आयो । भाइ केटाहरु नाउनी जस्तो कुरा गर्छ के गर्नी
ह्य्या दाइ तिनरु नआए बाल दुई जना मात्र भएनी चलदिनी हो । ल ल म बाइक लेर
आउछु रेडि भएर बस ।ओके ।तेस्तै दिउँसो को १ बजे हामी निस्केउ सिखरबेसि भइ ।
कोस्काडेमा बाइक राखी शिखर बेसिको बस चड्योउ ।
सिमसिम पानी परिराको थियो हामी शिखर्बेसिको उकालो चड्दै थियोउ। बाटोमा एक
जना दाइले भन्दै थिए ! का सम्म हो भाइहरु ।मैले भने गोसाइँकुण्ड ।अहो भाइहरु
नजादा हुन्छ । तपाइहरु पुग्नु हुन्न । मैले भने आट हो दाइ सकिन्छ। बेलुकी हुँदै थियो
बाँस बस्ने घर हेर्दै उकालो लागेउ ।बाटोको घरमा एक बुबालाई सोधेउ ।
बिजए : त्यो माथिको स्कुलले घर तिर होटल वा बाँस बस्ने ठाउँ होला।
बुवा : होटल त छैन ।बाँस भने पाइन्छ ।
(मैले धन्यवाद भन्दै चुरोट लिनुहुन्छ भने )
बुवा :जाडो छ खाइदिउन त ।
साझमा एउटा सानो घरमा बाँस मागेउ र बाँस पनि दिए। ८ बजे समन गफ गरेउ।साग
र भात खाइओरी सुतेउ।
बिहानको ६ बज्दै थियो बाहिर सिम्सिम पानी निरन्तर थियो।
घरको मान्छे लाई उठाइ बाँस बसेको पैसा ५ सय दियोउ। र शिखर्बेसिबाट उकालो
तस्वीर ;: शिखर्बेसी पार गर्दा ।
एक एक बोटल पानी भरी जङ्गल को बाटो भै दुबै जना हिडेउ।
घर बाट हिँड्दादा जङ्गल भै जादा पानी को समस्या हुदैन भनेको थिए तर निरन्तर
७ घन्टा समन पानी खान नपाउनुको पीडा हामी दुई जनालाइ थियो।जङ्गलको कर्नर
तिर एक चौरी कटेज देखियो तर हामिले पानी खाने इरादा लिइ लम्केको मात्र थियो तर
मानिस नभएको र साइड्मा दुइटा कुकुर देखेर हामी उकालै चडेउ ।
लगभह ९ घन्टा को हिनाइ पछी पानी भेटियो भन्दै बिजए दाइ अगि अगि लम्के।
पानी निकै मीठो थियो। बिहान देखि अहिले ३ बज्दा समन बाँस बस्ने ठाउँ भेटेको
थिएनौ न त कोहि मान्छे । ५ बजे तिर हामिले कटेज बनाउदै गरेको भेटेउ ।
बिजए : माथितिर बाँस पाइन्छ होला बाजे ?
बाजे : तपाइहरु एक्लेकुन्ड पुग्नु हुन्छ तेता बाँस मिल्छ ।
बिजए : ए हो हस त चुरोट लिनुहुन्छ ।
बाजे : हास्दै खै पाउ न त ।
साझमा एक्लेकुन्ड पुगदा भेडा धपाउदै एकजना बाजे भेटियो ।बाजे बाँस पाइन्छ ।
पाइन्छ भाइहरु तिर्थ हिडेकाहरुलाइ कसो। बरु भरेलाइ टिमुरे गुन्द्रुक र भात चल्छ ?
यो जाडोमा झन खत्रा मीठो हुन्छ हाम्ले भनेउ। खाना खाइओइ थर्कोमा दाउरा माथी
४ बट्टा चुरोट र ७/८ ओटा चौचौ बाजेलाइ दिएर हामी लागेउ ।
भैरबकुन्ड सम्म पुगन अझ हामिलाइ ४ घन्टा हिड्नु थियो।
फोटो खिच्दै लखित भै हिनाइ जारी थियो। कहिले रिसको आबेगमा
If you met shiva on the way kill him
जस्तो फिलिङ थियो किनकी गोसाइँकुण्ड को यात्रा चानचुने थिएन।
बिहानको १० बजे भैरवकुन्ड पुगेउ ।
खयर ११:२० मा गोसाइँकुण्ड पुगन सफल भएउ ।
३ दिनको हिडाइ र दरिलो आटले यात्रा मिठासमय भयो।
फर्किदा लौरिबिनायक , देउराली , भञ्ज्याङ् भै रसुवा आइ बसियो।
Haveagreat, awesome , daring journey with Bijay Dai.
nishan.wordpress	Travel Time	Leaveacomment December 21, 2018 1 Minute
nishan.wordpress	Uncategorized	1 Comment December 20, 2018 December 20, 2018 1 Minute